HASHU MAANKAYGA GADDAYE MA MASAAR BAY LIQDAY!!
Mahad Ilaah baa iska leh, nabad iyo naxariisna Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
Xamar waa nabad iyo nabad maaha laysku mari waa!!
Xabashi waa saaxiib iyo waa cadow laysla garan waa!!
Danta guud iyo midda gaar ahaaneed laysku dari waa!!
Qaran dumin iyo qabyaalad u orod layska dayn waa!!
Qof kasta oo niyad Soomaalinimo iyo garasho ku harsantahay wuxuu fahmayaa ama arki karaa sida xaalka dalkeennii usii cakirmayo maalinba maalinta ka danbeysa. Waxaa kuu soo baxaysa in aragti iyo siyaasad naga xeeldheer oo inta badan Soomaalida maanta gaar ahaan intooda siyaasadda faraha kula jirtaa ay garan la’yihiin nala kula ciyaaray!.
XAMAR WAA NABAD!! MAYA NABAD MAAHA!! MIDKEE BAA SAXA??
Maalmahaan waxaa magaalada Xamar caasimadda dalka Soomaaliya ku sugnaa wufuud ballaaran oo ka socotay labada Gole ee ku meelgaarka ah. Waxay sheegeen in ay Xamar u aadayeen in ay soo indha indheeyaan xaaladda nabadgelyo iyo sida ay suurta gal u noqon karto in dawladda ku meelgaarka ah iyo golayaasheedu caasimadda u guuraan waqtiga dhow. Ma xuma waa fikrad fiican iyo dadaal loo baahnaa. Waxaase dadka soomaaliyeed intooda dhexdhexaadka ahi fahmi waayeen oo wax lala yaabo ku noqotay, in madaxdii wufuuddaas qaar ka mid ah iyo xubno sarsare oo xogdoonkaas ka mid ahaa ay isla markiiba ku dhawaaqeen iyagoon garoonkii ay kasoo dageen dhaafin “Xamar waa nabad, wixii laga sheegayey waa been”. Soo kama fiicnayn in ay horta xogdoonkoodii galaan, wixii jira ogaadaan, madax iyo minjaba la kulmaan, kadibna qiimayn sameeyaan? Kadibna dadkii ay ka yimaadeen ula soo noqdaan, dabadeedna go’aan kasoo saaraan wixii ay la soo kulmeen??
Marka nabadgelyo magaalo laga hadlayo, su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay:
Horta yaa maamula ama ka taliya magaaladaas?
Hubka iyo waxyaalaha nabadda wiiqa yaa gacanta ku haya
Dadka magaaladaas degen ma colaad baa ka dhaxaysa mise is afgarad?
Dadka halkaas degen ma isku dan iyo aragti baa mise waa kala dan?
Dadka halkaas degen taladu ma ka go’daa oo go’aan ma qaadan karaan?
Dadka magaalada Xamar degen waa afar qaybood:
Dadweynaha guud oo ah inta badan ah
Hoggaamiyaasha kooxaha iyo mallayshiyaadkooda
Ganacsatada iyo mallayshiyaadkooda
Maxkamadaha iyo mallayshiyaadkooda
Aniga aragtidayda waxaan qabaa in Xamar ay maamulaan oo ka taliyaan saddexda qaybood ee mallayshiyaadka leh, saddexdooduna waa kala aragti iyo kala dan. Sidaa darteed qofka siyaasiga ah ee Xamar usoo aaday in uu qiimayn ku soo sameeyo xaaladdeeda nabadgelyo waa in uusan ku sirmin baahida qaybta koowaad ama dadweynaha. Waayo dadweynuhu Xamar ma maamulo, taladeedu kama go’do, dagaalna kama dhaxeeyo! Nabad iyo dawladna waa u diyaar, waana u baahanyihiin.
Haddaba qofka xal, xog iyo xaqiiqo doonka ahi wuxuu fahmi karaa in Xamar aysan kulansan xaaladaha lagu tilmaami karo magaalo nabadgelyo ka jirto, waayo magaalo ay ka taliyaan saddex qolo oo kala aragti ah, kala dan ah, isku deegaanna ah lama dhihi karo waa nabad! Dadka dharaar cad Xamar dadka ku dila yey yihiin, xaggee galaan? Yaa ka danbeeya? Haddii aan su’aalahaas jawaab loo hayn lama dhihi karo Xamar waa nabad.
SIDEE XAMAR NABAD LOOGA DHIGI KARAA?
Waa su’aal aad u culus, rag badanna hortay isku dayeen xal u raadinteeda. Waxaanse kusoo koobi lahaa dhowr arrimood oo u baahan karti iyo go’aan.
Sidaan kor kusoo sheegay Xamar hal koox kama taliso, sidaa darteed waxaa muhiim ah in kooxaha hubaysan oo dhan lala kulmo lagana qayb geliyo xal u raadinta Xamar.
Maadaama inta badan hoggaamiyayaasha kooxaha hubaysan marka laga reebo Maxkamadaha ay ka qaybqaateen shirkii Kenya waxna ka saxiixeen go’aannadii kasoo baxay, waxaa la gudboon in ay mallayshiyaadkooda Xamar ka saaraan oo meel ka baxsan caasimadda tababar uga furaan inta laga helayo ciidan qaran oo ay ka mid noqdaan.
In Hubka culus isna meel la isugu geeyo, loona xilsaaro ilaalintiisa ilaalo ama korjoogto laga soo baryey caalamka kale, si aan la isugu tuhmin khiyaano iyo bililiqo hor leh.
In Maxkamadaha Islaamiga ah iyagana laga codsado in ay sidaas oo kale sameeyaan, loona ballan qaado in aan xadgudub lagu sameyn doonin, wixii mallayshiyaadka kale helaanna xaq u yeelan doonaan.
Intaa kadib in ciiddankii Booliska Soomaaliyeed iyo Asluubta wixii ka jooga loo yeero oo goboladoo dhan looga yeero, la habeeyo la isku dhafo kadibna ammaanka magaalada loo xilsaaro. Haddii shantaas qodob ee sare qabsoomaan waxaan arkaa in Soomaaliya dawladda u dhalatay kobci karto, caasimadda degi karto nabadna lagu soo dabaali karo, iyadoo aan loo baahan gacan iyo ciidan shisheeye.
XABASHI WAA SAAXIIB! MAYA WAA CADOW MIDKEE BAA SAX AH?
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “Geeljire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa”. Waxaad mooddaa in xigmadda maahmaahdaas uu hoggaamiyaha Itoobiya ka fahmi ogyahay hoggaamiyaha cusub ee Soomaaliya! Soomaaliya inay degto baan rabnaa oo dawlad yeelato hubna waa isugu dhiibeynaa waa geeljire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa! Soomaaliya inay qaran ahaato iyo midnimadeeda waan jecelnahay, gobol gobolna waan ula shirayaa heshiisna waan ula gelayaa waa – geeljire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa! Soomaaliya ciidamo nabadda suga oo dawladda cusub gacanqabta ayey u baahan tahay, annagaana ciidanka ugu badan iyo saanadba ku taakuleynayna – waxay iila egtahay sheekadii ninka carbeed ee saxraha teendhada ka dhistay, iyo ratigiisii!! Ratigii oo bannaanka dhaxan xun ku heshay ayaa saaxiibkiis ka codsaday in uu teendhada gafuurka ama sanka la soo galo. Aqbalaad ka dib wuxuu codsaday in qoortii ama surkiina qaboobay ee loo ogolaado in uu soo yara durko! Wuxuu soo xamaartaba wuxuu haraati dibadda ugu saaray odaygii carbeed, halkaasna teendhadii kaligiis u haray!. Waxay kaloo Soomaalidu ku maahmaahdaa “ Balaayo gafuur la qabto ayey leedahay ee dabo la qabto malaha”, waxaan uga jeedaa xataa haddii aan ka dhigno in Itoobiya cadaawad noo qabin oo wanaag nala doonayso, maxaa inoo diidaya in aan siyaabo kale oo aan ciidan Itoobiyaan ahi lug ku lahayn arrimaheenna u xallisanno. Sida Ciidankii Soomaaliyeed oo boorka laga jafo, ciidan aan Itoobiya ku jirin ama aan dawladaha deriska ahi ku jirin (si aysan noogu xanaaqin balaqabtadu!) in la kaashado.
Waxaa kaloo waayo aragnimo lagu soo ogaaday “in ciidan dal qabsaday uu siduu doono ka yeelo” waayo nin kaa xoog badan hortaa buu xanaaqaa!! Gabdhahay kufsanayaan, masaajiddaday xirayaan, waxay rabaan bay xadayaan waayo cid ka joog dhihi kartaa ma jirto oo iyagaa meesha ka taliya!! Sidaa darteed waxaa la gudboon siyaasiga maanta ee majaraha u haya mustaqbalka dalka in uu ka fiirsado keenista ciidan shisheeye (waxaa qeex kuugu filan kalmadda –shisheeye). Haddiise laga maarmi waayo waa in ay noqotaa wax la maamuli karo iyo qawaaniin adag oo keenis iyo bixinba laga baaraan degey, ee aysan noqon ciidan dalkale maamulo.
Xuuraansi hoosaan ku helay, Xabashi maankeede
Xaglo geel haddaan laysku jebin, looma xaal-helo’e
Iyaduna xalkaas bay waddaa, waana loo xulaye
Xisaabaad horaa weli kumaqan, lagala xaajoone
Xudduudihii la beensiiyey baan, laga xorayn toone
Xukunkeeda waataan kun sano, xiiso loo qabine
Xalay- dhalay maxaa idinka dhigay, Xabashi waa tiiye?
Gabaygii Xankakaabsi:- Nabaddoon
Xamar iyo Xabashi haddaan ka hadlay, anoo rajaynaya in inta aragtida dheer iyo Soomaaliga dhabta ahi ila fahmeen biyodhaca qormadaan, waxaan kusoo xirayaa qoraalkaygaan talooyin.
Walaalayaal talada adaa ku nool ee iyadu kuma noola, war hooy yaan la dayicin fursddaas horteenna ah maanta. War hooy nin aad aqoon jirtay yaa tahay lama yiraahdo. War hooy haddaan la kala roonaan roob ma da’o. War hooy talo walaal diide waa turun turoodaa. War hooy caggo dhiiqo midba mar baa la saaraa. Waxa ina horyaal waa mustaqbalka iyo aayaha ummad dhan, dal, dad iyo diin lagu tacadiyey oo daryeel u baahan. War lama joogo waqti la kala aargoosto, war waa kugu dhimay kaa dhimay kiinnii adkaada iyo kii laga adkaadaaba. War lama joogo waqti la xisaabtamo oo wixii laysku haystayba daate oo dad kale ayaa gacanta ku haya.
Siyaasigu waa inuu xoogga saaraa marxalad kasta:
. Wixii dalka dan ugu jirto
. Wixii dadka dan ugu jirto
. Wixii isaga dan ugu jirto
Siyaasiga nadiifka ah ee siyaasadda saxda ah fahmayaa sidaas ayuu u kala hormariyaa dadaalkiisa iyo aragtidiisa ku aaddan siyaasadda.
Meel san iyo wixii san Ilaah ha nagu aaddiyo oo ha noo sahlo.